एक सुन्तलाको साथ तेल बत्ती कसरी बनाउने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> गृह प्रयोगहरू >> सुन्तलाबाट तेलको बत्ती कसरी बनाउने
यो केहि चीज हो जुन एक मित्रले धेरै समय अघि मलाई सिकाए, केवल सुन्तला र अलि तेलले हामी गर्न सक्छौं हाम्रो आफ्नै तेल बत्ती प्राप्त गर्नुहोस् केहि मिनेटमा
यो सत्य हो कि यसले हामीलाई उज्यालो पार्न प्रदान गर्दैन, तर यो रातको सजावटको जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईंसँग रोमान्टिक डिनर छ वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने साथीभाइ वा परिवारसँग खाजा वा डिनरमा कुतूहल देखाउनुहोस्.
हाम्रो बत्ती बनाउनका लागि, हामीलाई निम्न सामग्रीहरू चाहिन्छ। सुन्तला र अलि अलि तेल, मैले ती मध्ये केही लिएको छु र यो पहिले नै खाना पकाउन प्रयोग भैरहेको छ। यो हामी कसरी रीसायकल गर्छौं ;-)
हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको छाला लाई हटाउनु हो सुन्तला यसलाई २ भागमा अलग गर्दै। यसको लागि, हामी चक्कुले चिनो लगाउँदछौं र हामी औंलाले अलग गर्दछौं, भिडियोमा यो धेरै राम्रो देखिन्छ।
हाम्रोलागि सब भन्दा चासो लाग्ने भाग पुच्छर हो, जुन हामी विकको रूपमा प्रयोग गर्ने छौं। हामीले यस अंशलाई होशियारीका साथ हटाउनुपर्नेछ कि यो भत्किएन र तेल फेरि हराउने छ।
यससँग तपाईं व्यावहारिक हुनुहुन्छ बत्ती समाप्त भयो। हामीले भर्खर तेल हाल्नु पर्छ यो पक्का गर्दै कि हाम्रो "बाती" तेलमा राम्ररी भिजेको छ।
तर तपाईं भिडियो संग सबै कुरा स्पष्ट देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं हामीलाई पछ्याउँनुहुन्न भने, सदस्यता लिनुहोस् म साप्ताहिक भिडियो पोस्ट गर्न सुरू गर्न चाहन्छु
यहाँ म सुन्तलाका केहि फोटोहरू पनि छोडिदिन्छु। को रूपमा प्रयोग भयो मैनबत्ती, बत्ती वा बत्ती
वायुविहीन वा गैर-वायवीय पाels्ग्रा
ट्याबी। तपाईंको DIY खुला स्रोत कार निर्माण गर्नुहोस्
"सुन्तलाको साथ तेल बत्ती कसरी बनाउने" मा9टिप्पणीहरू
फेब्रुअरी १०, २०११ बेलुकी :6::2014
फेब्रुअरी १०, २०११ बेलुकी :12::2014
मार्च १२, २०१ बिहान २::12 बिहान
यो ठीक छ र यो स्वाभाविक छ
मार्च १,, २०१ 15 अपरान्ह :2014: 10 at
उम्म, तर यो ट्यान्जाइन हो, नारंगी अम्म् होइन
मे २०, २०१ 20:०:2014 अपराह्न
राम्रो र त्यो धनी सिट्रसको गन्ध महसुस गर्नुपर्दछ
जुलाई १, २०१ साँझ :1::2014 बजे
यो एक शलजम संग गर्न सकिन्छ ...?
अगस्त,, २०१3११::० अपराह्न
नमस्ते, म तिनीहरूलाई धेरै कूल, स्कूल प्रोजेक्टमा प्रस्तुत गर्न सजिलो लाग्छ। तर म जान्न चाहान्छु यदि म अर्को प्रकारको फल प्रयोग गर्न सक्छु। धन्यबाद।
अगस्त,, २०१5११::० अपराह्न
खैर, वास्तवमा एक मात्र कुरा जसले सुन्तलालाई महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ कि हामी एक पुच्छरको रूपमा लिन सक्छौं जुन एक विकको रूपमा रहनेछ। मलाई थाहा छैन यदि सिट्रस बाहेक तपाईंसँग यी गुणहरू सहित कुनै अन्य फलहरू छन्। यदि तपाईंले एक प्रयास गर्नुभयो र यो राम्रोसँग कार्य गर्दछ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
अगस्त,, २०१ 8 बिहान १२:2015०
सुन्तला राम्रो छ इकोसिस्टम लाई हानी गर्दैन